नेपाल इन्स्योरेन्सको साधारण सभा सम्पन्न - Aathikbazarnews.com नेपाल इन्स्योरेन्सको साधारण सभा सम्पन्न -
बोनस शेयरको प्रस्ताव
नेपाल इन्स्योरेन्सले ७ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । इन्स्योरेन्सले काठमाडौंमा ७० औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्दै कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट वितरण गर्ने गरी उक्त लाभांश पारित गरेको हो ।
यो वर्ष नगद लाभांश नदिएकाले बोनसमा लाग्ने कर भने लगानीकर्ता आफैले तिर्नुपर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।
कम्पनीले प्रधान कार्यालयसँगै ४६ वटा शाखा कार्यालय र २९ वटा सेवा केन्द्र गरी ७६ स्थानबाट बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र १६ वटा शाखा थप गर्ने तयारी कम्पनीको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस कम्पनीले १८ करोड ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आव २०७४÷७५ मा ११ करोड ८८ लाख ६ हजार रुपैयाँ थियो ।
कम्पनीको गत आवको चौंथो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक १७ दशमलव ७२ रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य २९४ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य ४ अंकले घटेको हो ।
कुन रक्सीमा कति बढ्यो कर ?
शेयर खरिद विक्रीमा मेरो कुनै संग्लनता छैन: भिष्मराज ढुंगाना अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड
एनएमबिले शुरु गर्यो एआईमा आधारित भिडियो केवाईसी
विकास बैंकका शाखा काठमाडौं उपत्यकामा कहाँ कहाँ खुल्ने छन् ?
सानिमा लाइफको बोनस दर बढ्यो